Fyodor Smolov tantaran'ny tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Home TAFIKA ASIA FOOTBALL Fyodor Smolov tantaran'ny tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Ny LB dia manolotra ny rakitsoratra feno momba ny tarika fanta-daza Rosiana iray izay fantatra amin'ny anaram-bosotra; "Fedor". Ny tantarantsika Fyodor Smolov momba ny tantaram-pahaterahana sy ny tantaram-piainana tsy fantatra dia mitondra ny fitantarana feno momba ny zava-mitranga misy hatramin'izay hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny analizy dia mirakitra ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny tranga hafa momba ny OFF-Pitch (kely fantany) momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra fa nahazo tanjona maro i Fyodor tao amin'ny asany. Na dia izany aza, mpankafy vitsivitsy ihany no mahafantatra momba ny Bio Bio Fyodor Smolov izay tena mahaliana. Amin'izao fotoana izao tsy misy adieu intsony, andao hanomboka.
Fyodor Smolov ny tantaram-pitiavam-bavam-bolo mbola tsy fantatra momba ny tantaram-piainana -Voalohandohan'ny fiainana
Fyodor Mikhaylovich Smolov dia teraka tamin'ny 9th of February 1990 ho any Reniny, Irina Smolova sy ny rainy, Mikhail Smolov ao Saratov, Atsimo Andrefan'i Rosia. Izy no teraka ho laharana tokana sy zanaky ny patantany mpandala ny nentin-drazana.
Amin'ny maha-zazakely azy, niaina tao amin'ny faritra manodidina an'i Saratov ao Rosia ny fianakavian'i Fyodor. Izany no nahatonga ny fitaovan'ny ray aman-dreniny ho fitaovana maro hiarovana ny zanany amin'ny fitarik'ireo tovolahy ireo. Amin'ny lafiny iray hafa mba hisorohana ny zanany mifangaro amin'ny namana ratsy, dia nentin'i Mikhail rainy tany Fyodor ny klioban'ny baolina kitra ao an-tanàna, Sokol noho ny fisoratana anarana. Indrisy fa tsy mpankafy ny klioban'ny baolina kitra any an-tanàna i Fyodor Smolov (Sokol Saratov) izay nalain'ny rainy azy hanomboka ny asany amin'ny fahatanorany. Feno ny fony "Lokomotiv Moscow" any Rosia Renivohitra. Tao no nanonofy hanomboka ny asany.
Nanonofy ny ho lasa mpikambana ao amin'ny klioba izy indray andro any. Rehefa fantany fa tsy nisy ny fanangonam-bola mba hanaovana izany, dia nanohy ny klioba tsy nanohana azy i Fyodor Smolov. Ny fanapahan-kevitry ny rainy dia nisy fiantraikany ratsy teo amin'ny fahombiazan'ny fahombiazan'ny fahatanorany.
Fyodor Smolov dia niezaka hatrany hiatrika ny baolina kitra tanora. Namono ny fanadinadinan'ny baolina kitra mihitsy aza izy tamin'ny taona 14. Fotoana nanombohan-drainy tamin'izay ny zandriny dia nofatorana sy niredareda tamin'ny fanatanjahan-tena. Nanantitrantitra ny rainy fa ny zanany lahy dia tokony hijery ny fandaharana farany amin'ny baolina kitra amin'izao fotoana izao, avy amin'ny klioba hafa. Nofehezin'i Mikhail fa hiala amin'ny baolina ny zanany lahy raha tsy nahomby tamin'ny fanadinana faha-efatra.
Soa ihany, i Fyodor dia nandalo ny fandinihana avy amin'ny mpilalao baolina vaovao Master Saturn avy any Yegoryevsk, faritra Maosko. Faly izy ireo nanaiky ilay zazalahy kely nahafinaritra ary mbola nitazona ny fahaiza-manaony i Fyodor tamin'ny fanatanjahan-tena tiany. Farany dia namarana ny asany ho an'ny tanora tao Saturn Moscow izy izay nilalao teo anelanelan'ny 2006 ka hatramin'ny 2007.
Tao amin'ny 16, nanao sonia ny fifanarahana matihanina voalohany amin'ny Dinamo Moscow i Fyodor Smolov. Tamin'ity indray mitoraka ity, nanjary tapa-kevitra tanteraka ny hahatanteraka ny nofinofiny ary ny tanjony ho lasa milina kisendrasendra dia tsy hoe faniriana fotsiny. Raha ny momba ny tantaram-pianakaviana dia miahiahy, tMiala sasatra izy, araka ny filazany, ankehitriny.
Fyodor Smolov ny tantaram-pitiavam-bavam-bolo mbola tsy fantatra momba ny tantaram-piainana -Relationship Life
Ao ambadiky ny lehilahy lehibe rehetra, misy vehivavy tsara, na izany no fitenenana. Ary ao ambadik'ireo mpilalao baolina kitra Rosiana mahomby, misy vehivavy, vehivavy sakaiza na sipa. Raha tsy misy fisalasalana, ny fahaiza-manaon'i Fyodor, ary ny fomba fiainany teo an-tampony, dia manangana sary feno azy.
Tao amin'ny 2012, nihaona tamin'ny modely rosiana sy televiziona TV izy, Victor Lopyreva tamin'ny fety nahaterahany (Yuri Zhirkov) tamin'ny andro nahaterahany. Raha raisina avy amin'ny hatsaran-tarehiny, zava-dehibe ny milaza fa i Victoria no nandresy an'i Miss Russia 2003 pageant.
Ny tena zava-dehibe iray hanamarihana dia ny hoe; Victoria Lopyreva dia 7 taona efa antitra noho ny lehilahy. Na izany aza dia tsy nanakana ny fifandraisana am-pitiavan-tenany tsy hihamaharatsiny sy ny zava-dehibe kokoa, ny fanambadiana fanambadiana izay nitranga tao amin'ny [no-peratra] fomba. Tamin'ny Desambra 2013, lovebirds; Lopyreva sy Fyodor nanana mariazy tsara tarehy sy romana tany Maldives. Maharitra roa taona monja ny fanambadian'izy ireo vao hisaraka. Samy nijanona nifampiresaka tamin'ny Jolay 2016 ny roa tonta.
Antony maromaro momba ny fisaraham-panambadiana no hita etsy ambany ao amin'ny Family Facts Fyodor Smolov araka ny fanazavan'i Fyodor maman. Ny haino aman-jery Rosiana anefa, dia nitatitra fa ny fisaraham-panambadiana dia tonga araka ny filazan'i Fyodor Smolov ho hitan'i Miranda Shelia, modely Rosiana hafa nalaina etsy ambany.
Tsara ny manamarika fa miitatra i Miranda (sary etsy ambony) Irina Shayk, Modely mahafinaritra iray hafa izay efa zatra Cristiano Ronaldo 's lover. Taorian'ny fampisehoana mahantra Rosiana tao amin'ny Championship 2016 UEFA Eoropeana, nipoaka i Fyodor niaraka tamin'ny sipany Miranda Shelia.
Indray, raha ny filalaovan'ny 2016, ny fampahalalam-baovao Rosiana dia nitatitra fa nanomboka nampiaraka tamin'i Sofia Nikitchuk izay mpandresy Rosia Miss Russia.
Fyodor Smolov ny tantaram-pitiavam-bavam-bolo mbola tsy fantatra momba ny tantaram-piainana -Fianakaviana
Mother: Irina Smolova misy sary etsy ambany miaraka amin'ny zanany malalany dia ny renin'i Fyodor.
Ny renin'i Fedor Smolov dia naneho ampahibemaso momba ny fisaraham-panambadiana ny zanany lahy miaraka amin'ny modelin'i Victoria Lopyreva. Niaiky izy fa tapaka ny fon'ny zanak'anabaviny izay nanokana fotoana betsaka hikarakarany ny asany fa tsy ny zavatra ilain'ny vadiny.
I Irina dia nanamarika fa ny mpilalao sy ny modely dia tamin'ny alàlan'ny fiatoana maharary. Nanana fifandraisana tena tsara izy sy i Victoria, ary nantsoin'ilay zazavavy mpangataka izy reny. Ao anatin'ny teniny ...
"Tao anatin'ny telo taona niarahan'izy ireo dia nanorina fifandraisana tena tsara taminy aho, tena nanohina sy nanambony izany, fony niantso ahy i Neny. Vika sy izaho dia mifandray amin'ny fomba mahazatra ankehitriny ".
"Tsy afaka miteny aho, mazava ho azy, kanefa angamba tsy afaka nanavotra ny fifandraisan'izy ireo. Ho an'i Fyodor dia sarotra be: mieritreritra aho, tiany izy. Angamba tamin'ny fotoana iray, ny halavirana dia nitana anjara toerana ratsy.
Raha i Fyodor no miofana any amin'ny tobim-piofanana, dia mazoto miasa ihany koa i Victoria - izy no mpanolotra fandaharana amin'ny fahitalavitra sy lamaody, mahomby izy, ary mitaky ezaka be ny asany. Indraindray, mitodika, dia ny tsy fahampian'ny fotoana ho an'i Fyodor. Izy no olona tia mampionona ny fonenany, ny fijeriny. Angamba izany no antony mahatonga ny tovovavy iray manapa-kevitra ny hiaraka aminy, dia tokony hifanaraka aminy ".
hoy i Irina Smolova (renin'i Fyodor Smolov).
Fyodor Smolov ny tantaram-pitiavam-bavam-bolo mbola tsy fantatra momba ny tantaram-piainana -Ny fiainan'ny tena manokana
Fyodor Smolov tia tatoazy. Ilay mpanao fanatanjahan-tena dia nanana tatoazy voalohany tao amin'ny 17 ary amin'izao fotoana izao, tsy afaka milaza izy hoe firy ny tatoazy ananany. Ny tattoos rehetra dia mihodina ary mamorona endrika sary tokana araka ny hita eo amin'ny sary etsy ambany.
Manohana ny AC Milan hatramin'ny vanim-potoanan'ny 1997 / 98 ary nanonona indray mandeha George Weah ary Andriy Shevchenko tahaka ny mpilalao tiany indrindra.
Ny fahalemen'i Fyodor: Mihazakazaka amin'ny fanehoana fihetseham-po izy. Ankoatr'izany dia afaka ny ho ara-batana, tsy ho afa-po ary tsy ho sariaka izy.
Inona no tsy nankasitrahan'i Fyodor: Tsy tiany ny fampanantenana tapaka, mahatsiaro ho manirery, mahatsiravina na mampihetsi-po, olona tsy mitovy hevitra aminy.
Ny tahotra lehibe indrindra nataon'i Fyodor dia mahita fa voafetra ihany na voafetra. Izany no mahatonga azy ho nangatsiaka sy tsy saro-kenatra. Na izany aza, manana fepetra fiarovana manohitra ny fifandraisana akaiky izy. Mila mianatra ny fomba itokisany ny vehivavy i Fyodor, mba hanehoana ny fihetseham-pony amin'ny fomba tsara.
Ny mpilalao baolina koa dia tia mamaky tantara an-tsary avy amin'ny andro fahazazany tahaka ny sary etsy ambany.
Ireo mpitsikilo momba ny heloka bevava ho an'i Mario Puzo sy Arturo Pérez-Reverte, ireo tantara noforonina nataon'i Fyodor Dostoevsky, sy ny bokin'i Mikhail Bulgakov dia boky tiany indrindra.
Fyodor Smolov ny tantaram-pitiavam-bavam-bolo mbola tsy fantatra momba ny tantaram-piainana -Tsy sambatra amin'ny klioba lehibe any Eoropa
Amin'ny alahelo mampalahelo, nanambara tamin'i Maxim Online indray i Fyodor Smolov fa mihatsaravelatsihy hatrany ny manao sonia mpilalao avy any Rosia. Amin'ny teniny ...
Ny lalaon'ny ligin'ny fizarana ligy dia tsy hiala amin'ny lalan-drà hitondrany antsika. Hitako izany nandritra ny varavarankely fidirana. Manana tolotra sasantsasany aho, saingy izy rehetra dia nindramana tamin'ny zo hividianana mividy. Ny kliobàna lehibe any Eoropa dia mihevitra antsika ho moana sy miondrika.
Nanampy i Smolov fa misy ny stereotype sasany any Eorôpa rehefa tonga amin'ny mpilalao Rosiana.
FACT CHECK: Misaotra ny famakiana ny tantaram-pianakavian'i Fyodor Smolov momba ny tantaram-pitiavana sy ny zava-misy marina momba ny zavakanto. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery tsara ato amin'ity lahatsoratra ity ianao, azafady azafady ny fanamarihanao na manontania anay !.
Aleksandr Golovin tantaran'ny tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Aleksandr Kokorin tantaran'ny tantaram-piainana tsy hita isa
Ny tantaram-pitiavan'i Roman Pavlyuchenko momba ny tantaram-pitiavam-bahoa bebe kokoa no hitantsika momba ny biography
Andrey Arshavin tantaram-pitiavana momba ny tantaram-pahaterahana tsy hita isa
Daty navaozina: 23 jolay 2018
Daty navaozina: 22 jolay 2018